Yokupaka ku eziseceleni (SDA). I esihle yokupaka eceleni komgwaqo
Namuhla, emadolobheni amaningi imithetho ephathelene the yokupaka izimoto zishintshile. Ukushiya imoto endaweni engafanele, ungakwazi ngokushesha uthole isigwebo. Kulesi sihloko thina sizophendula umbuzo yini imithetho yokupaka eceleni komgwaqo, futhi abanye ezihlobene kuye.
Ngaphansi lo mqondo kusho isikhala lapho abahamba ngezinyawo ukuhambisa. It ahlukaniswa onguthelawayeka ngumuntu umngcele, ukutshala izihlahla noma izimbali, utshani.
Imithetho yomgwaqo traffic kungavunyelwe ukupaka kule ndawo. Kukhona ngokucacile ezibekwe nomqondo eceleni komgwaqo lomgwaqo futhi yabahamba ngezinyawo. Kukhona umehluko kuyadingeka, ngoba abahamba ngezinyawo ezihambayo lapha, upake imoto esiphazamisayo. Ngakho-ke, lolu daba kulawulwa umthetho esihlukile.
On the ingxenye umshayeli futhi kudingeka uqaphe ukuba awutholi yokupaka ohlangothini komgwaqo kwaba imbangela ocolekileyo njengomnikelo epaki imoto eceleni komgwaqo. Imithethonqubo basho ngokucacile ukuthi komgwaqo kunengxenye komgwaqo, eseduze endleleni. Kulokhu ehlombe kuyinto ezingeni elifanayo nalo, kodwa ingahluka nezinye enamathela noma mshini.
Gandelwe futhi eseduze eceleni komgwaqo izimoto. Ngakho-ke, ngo-umkhuba ke ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi imiqondo le aphambana. Ngokwesibonelo, lapho eduze strip endleleni kuyo ingumhlabathi ngetshe ochotshoziwe, abakwazi ngokuqiniseka, kuba lomgwaqo noma eceleni komgwaqo. Ezimweni ezinjalo zivela zihambe, ucabangela ukuthi ingxenye aguqulelwe ukunyakaza ngezinyawo. Khona-ke ungakwazi Ungakhathazeki ngokuthi iziphi kuyodingeka bakhokhe inhlawulo yokupaka eceleni komgwaqo.
You azi ukuthi sendleleni ohlangothini kuphela nabashayeli mopeds kanye amabhayisikili, izithuthuthu kanye nezimoto akuvunyelwe. Le ngxenye yomgwaqo ingasetshenziswa kuphela lapho kuphenduka. Nokho, lesi sibonelo okufana, uma kungekho okunye.
On eceleni komgwaqo njengoba izimoto lingalidonsa wezimpahla noma ukwehla abagibeli, okungukuthi, ukwenza izinyathelo efanayo sibukela. Imisa noma, ikakhulukazi, ezindaweni zokupaka akuvunyelwe. Ukuxolela ziyingxenye komgwaqo lapho kukhona izimpawu ezikhethekile lapho yokupaka uvunyelwe eceleni komgwaqo (noma ohlangothini komgwaqo).
Umqondo eqala indawo yezinyawo lapho ezihambayo abahamba ngezinyawo noma ahamba ngamabhayisekili. Okuningi okuqukethwe yile ngxenye lwabelwe uhlamvu ekhethekile. Ayikho yokupaka noma kokusebenza kule sayithi akuvunyelwe. Naphezu kweqiniso lokuthi umqondo SDA kuholela elilodwa noma ezinye, eceleni komgwaqo udidekile futhi indlela yokuhamba lula. Abashayeli bavame ukulishaya indiva imithetho yomgwaqo futhi ushiye umshini, ukuchaza izenzo zakhe ngokuthi kwesigaba komgwaqo azikho imingcele.
kungakhathaliseki yokupaka uvunyelwe eceleni komgwaqo
Yiqiniso, impendulo yalo mbuzo okungekuhle. Isijeziso ngeke wathola kungakhathaliseki ukuthi zingaki amasentimitha umshayeli waxosha ungene eceleni komgwaqo. Yokupaka ku eziseceleni akuvunyelwe.
Abanye abashayeli phikisana izenzo ngokuthi ungagxambukeli umuntu, wafaka imoto on the spot ngaso sonke isikhathi, 20 amamitha kusuka isakhiwo kwanela abahamba emgwaqweni, ngisho nge stroller odlula kalula. Kodwa lezi zimpikiswano musa ukudlala noma yimuphi indima. Kukhona umthetho, futhi amaphoyisa omgwaqo ukubhala inhlawulo, ngokusho kwakhe.
Yokupaka ku eziseceleni kungathatha indawo kuphela uma imoto lobuchwepheshe iphutha noma i-force majeure amacala. Nokho, uma kunjalo, kumelwe alethe ubufakazi obunamandla.
Ukuze uqonde ukuthi yokupaka uvunyelwe endaweni, ngokwanele ukuba ukucabanga ngokoqobo edolobheni. Izindawo yokupaka akwanele. Ngakho-ke, abashayeli nethuba park eduze eceleni komgwaqo. Futhi SDA for ukuthi ngisho wasungula umqondo okhethekile.
Kodwa yokupaka ku eziseceleni kuvunyelwe kuphela ezimweni lapho kukhona izimpawu ezikhethekile 8.6.2 - 8.6.9. Ngokusho kwabo, imoto ongema ekufikeni:
Kuphela ilungelo noma amasondo kwasala;
zonke amasondo kuphela ngaphambili noma kuphela ohlangothini ezingemuva;
kuphela ngaphambili noma kuphela lamasondo angemuva.
Imiqondo ethile eceleni komgwaqo yokupaka okolotrotuarnoy kuhluke. Uma wokugubha engekho, ukuqonda isimo phansi akulula.
I esihle yokupaka eceleni komgwaqo
Njengoba umgandayo - ezindaweni ezenzelwe abantu abahamba emgwaqweni, kusho amaphoyisa omgwaqo bezilokhu zibangela imibuzo mayelana lokuthi yokupaka esizeni. Kufaneleka kulokhu kuphela khona i-force majeure. Kodwa iqiniso kusadingeka ukufakazela.
Ukoniwa ebekiwe Administrative Ikhodi Article 12,19. Lithi ukuhlukumeza lemithetho yokupaka nje kukhona esithola esihle ruble 1000 emadolobheni zesifunda, futhi ruble 3000 eMoscow Petersburg.
Ngaphezu kwalokho, imoto ithunyelwa isigwebo-yokupaka. Khona-ke kufanele ibhaxa futhi lezi "amasevisi". Inkokhelo kulokhu luyanda ruble 7000. Futhi uma sinezela sikhathi nezinzwa, kuyoba nakakhulu.
Isijeziso ukushayela eceleni komgwaqo
umshayeli ngalokwenetisako angisoze dream ukukhwela imizila yezinyawo. Nokho, uma ufuna ukugibela, une Shell out ruble 2000. Yiqiniso, omunye umuntu futhi leli nani singabonakala singelutho, kodwa lona neze ubani ofuna. Ngokungafani okuhle, ngoba ukuthi yokupaka ku imizila yezinyawo, ukukhokhela ukushayela kumuntu osonile bayobe eyenziwa ngendlela efanayo: emzini ukubaluleka federal, nasemizini yesifunda.
I esihle yokupaka otshanini
Okokuqala, ukuze uthole incazelo yaleli umqondo akunakwenzeka namuhla. Yiqiniso, akuwona wonke amasayithi ngotshani kubo ngokuthi utshani. Ngakho-ke, ukuze uqonde izinhlawulo kungaba nzima.
Nokho, izingqondo eziyibonayo kakhulu Unga cinga leli amathuluzi lesifunda. Kukhona sici ezifana utshani esinqampuniwe. Ngakho, kwezinye izimo, baphetha ngokuthi uma hhayi utshani eduze okhrophiwe, ngakho endaweni njengenkulumo ukuba utshani.
Ngaphezu kwalokho, uzophawula ukuthi inani esihle eMoscow lisetudlwana kuka kweminye imizi. Enhloko-dolobha, inomthetho ovumela ku ukuvikelwa ekutshaleni. It kuchazwa icala futhi ukuthi umonakalo ube muhle ezindaweni ezisemadolobheni.
Esikhathini Ikhodi Administrative kuyisibopho eshiwo yokupaka ezifana ezindaweni zasemazweni, utshani zokudlala. Izakhamizi kuyodingeka bakhokhe $ 5 000, izikhulu - kusuka 10 000 kuya ku-15 ruble 000, futhi izinhlangano ezingokomthetho - kusuka 30 000 kuya ku-100 000 ruble.
khona sikhalo sakho
Abahamba ngezinyawo abakhathele ukubekezelela ukwephulwa esobala abashayeli bakhononda ngokuthi wenza yokupaka eceleni komgwaqo. Lapho ukukhononda ezimweni ezinjalo, futhi ungakwenza kanjani lokho kulungile? Uma unquma ukuyeka izenzo ezinjalo, sicela ubheke amaphoyisa omgwaqo wesifunda. Lokhu kwenziwa ngendlela elandelayo:
Imoto izithombe ngezindlela ezihlukahlukene ukuze shot hit amakamelo isimo futhi kwaba sobala ukuthi gumbi umshayeli alikho.
Iya website olusemthethweni omgwaqo.
Gcwalisa ifomu elingezansi futhi unamathisele izithombe efanayo kanye nedatha kwesokunxele.
Ngokuthakazelisayo, lobo inhlawulo yokupaka setha neziphathimandla zedolobha. Ngakho-ke, emadolobheni ahlukahlukene, nguye ihlukile. Ngokuvamile bakwazi ukugwema isigwebo, ngaphandle kwalapho kunezimo uma embozwe yiqhwa, futhi utshani ukuze angabonwa.
Umshayeli bazojeziswa, uma amaphoyisa omgwaqo kuzobonwa ngumhlaba yokupaka eceleni komgwaqo. iziqondiso Traffic linqume ezimweni ezinjalo nokuhlawuliswa. Futhi uma umnikazi imoto akuyona lucky, imoto izobe wathatha phezu esihle yokupaka. Ubufakazi ieala kuyoba izithombe kanye ukuchitha ubufakazi bofakazi noma bafakizicelo isicelo omgwaqo.
Kodwa uma umshayeli abone iloli donsa, uyena onelungelo lokusho ukuthatha imoto. Ngesikhathi esifanayo yena kuyodingeka bakhokhe inhlawulo noma kunjalo.
Lamuhla emhlabeni kunetimphi yokuthi ngisho uma yokupaka kwenziwa phezu kwendawo egandaywe ngamatshe egcekeni, umqaphi oda unelungelo ukubhala zibizwa. Nokho, umshayeli unelungelo. Ezimweni ezinjalo, kungase bemphikisa, ukwakha omunye ingxolo
Gwema isigwebo ayengakwenza, uma okwamanje lapho ebona wayethethelela engalibaleki amasondo ayo. Khona-ke kungenzeka ukuba bagcizelele ukuthi wayegade eceleni komgwaqo.
Enye impikiswano iwukuthi egomela ka ukungasebenzi imoto.
Uma kukhona izimpawu ezisobala eceleni komgwaqo, inguqulo esekelwe leli qiniso.
Ngaphezu kwalokho, kukhona i-force majeure, lapho ukwenza okuhlukile kwakungenakwenzeka.
Kunoma nguqulo ye isigwebo isamba kungahoxiswa noma encishisiwe. Nokho, uma ukubhaliswa eyenziwe yonke imithetho, "phumani," umshayeli izohluleka. ke Khona kungase kuzona izindleko ukuthi uhlale kwakuyoba ezingcono kakhulu kwi-ikhokhwe yokupaka.
Ngakho, uma ngempela kudingeka ukupaka, nakwezinye izindawo eziseduze ukukwenza ngaphandle amehlo traffic amaphoyisa. Qiniseka ukuthi abahamba ngezinyawo kwaba ezikahle ukuhamba ngemoto.
Yiqiniso, lezi zinyathelo abakwazi ukusiza futhi kufanele ngikhokhe inhlawulo. Nokho, uma le Iqiniso elibuhlungu akugcini, bese uphindela endaweni yokupaka, uthola ukuthi akukho moto. Lokhu kusho ukuthi-ke wathatha inhlawulo-yokupaka. Khona-ke lingandi kuphela imali ephakeme, kodwa futhi zokuchitha izinzwa. Ngakho, ngaphambi kokuba ukupaka, cabanga ngalokhu: mhlawumbe isimo singekho kakhulu, futhi kufanele ufune indawo lapho yokupaka uvunyelwe?
Indlela ubhalisele isakhiwo esisha sokuhlala yi IFC, ngokusebenzisa "amasevisi Yomphakathi"? Indlela ubhalisele indawo entsha yokuhlala, ngaphandle kokubhalela wangaphambili?
Tinchabano temhlaba: kungani siyidinga nommeli ongumakad 'ebona
Iziphi izinzuzo zikhutshaziwe amaqembu 3 of isifo ovamile?
Emizimbeni State of the Russian Federation: kwencazelo imisebenzi kanye namandla
Ukuzisekela ikhebula 4 4x16 SIP Ukucaciswa endaweni yesicelo
Astilba: ezihlukahlukene, ikakhulukazi ukulima nokutshala
Ithebula Kwezikhathi Zawo AS Griboyedov
Asp ngenela ezandleni zabo siqu
Isitembu "Umcabangi" uRudin: isithombe nencazelo